Goridhe Retriever Kukura uye Kurema Chati - Yekupedzisira Gwara - Inobereka
Goridhe Retriever Kukura uye Kurema Chati (Murume & Mukadzi) - Iyo Yakazara Nhungamiro
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinakidzwa.
Idzo imbwa dzinowana kushomeka kwekudya zvinovaka muviri uye kuwandisa kwekudya, kana kukura zvishoma kana nekukurumidza, dzinogona kuve nemhedzisiro kwenguva refu pahutano hwavo nehupenyu. Saka iwe unoziva sei kana mwana wako ari munzira?
Sangana neyakanaka imbwa inobereka Goridhe Retriever
Iwe uri munzvimbo chaiyo kana iwe uchida kuti mibvunzo yako ipindurwe!
Kuongorora: Zvishoma zvinonakidza chokwadi nezveGolden Retriever
Yekupedzisira Goridhe Retriever puppy kukura chati nehuremu
Goridhe Retriever Mukadzi Puppy Kukura Chati (lb & kg)
Goridhe Retriever Male Puppy Kukura Chati (lb & kg)
Goridhe Retriever puppy kukura nemifananidzo
8 zvinhu zvaunofanira kuziva nezve yako yeGolden Retriever kukura
Mutongo: Kukura zvakajairika hakuna kufanana kumwana mumwe nemumwe
Vanodzosera Goridhe iri pakati nepakati imbwa hombe dziri inozivikanwa nehukama hwavo uye jasi regoridhe .
Wanga uchiziva here kuti iyi imbwa yemhuri inozivikanwa inopinda mhando nhatu ? Kune iyo American Golden, yeCanada Goridhe, uye yeBritish Goridhe.
Iyi purebred inouyawo mu show imbwa uye inoshanda-kirasi dzakasiyana .
Ndeupi wepakati saizi yeGolden Retriever?
Iyo AKC yekurera chiyero inotaura izvozvo varume vakuru kudarika vakadzi . Ivo vanogona kuyera chero kupi kubva pamakumi matanhatu kusvika makumi mapfumbamwe mapaundi (27 kusvika 36 kg) uye vari 22 kusvika 24 inches (56 kusvika 61cm) kureba.
Vakadzi vane huremu hwepakati pe55 kusvika 70 kg (25 kusvika 32 kg) uye vane hurefu hwemasendimita 20 kusvika 22 (51 kusvika 56 cm).
Izvo zvinokwanisika kuwana imbwa inokura zvakanaka kupfuura kana pasi pevhareji chiyero. Kazhinji, iyi ndiyo runt yemarara.
TO achangoberekwa Golden Retriever puppy inofanirwa kuyera 14 kusvika 16 oz (0.4 - 0.45). Ivo vanowana huremu nekukurumidza uye vanofanirwa kukura 5-10% vhiki imwe neimwe.
Chimwe chezvikonzero nei iwe uchifanira kuongorora kukura kwako kweGolden Retriever mbwanana ndeyekuti uve nechokwadi chekuti ane hutano.
Mbwanana hadzi dzinokura nekukurumidza kana kukura mumwedzi mishoma yekutanga, ipapo varume vanobata uye vanosvika pakurema kwakazara.
Tine chati chekukura pazasi asi ziva kuti hachifanirwe kutorwa sevhangeri. 1 kana 2 lbs, chero nzira, hazvifanirwe kunge zvine basa.
Kana iwe ukaona kuti mwana wako haasi kuwana kana kuti ari kurasikirwa uremu, iwe unofanirwa kubvunza vet yako .
Unogona kuona kukura kwako kwakatemerwa nembwanana pazasi uye kufungidzira kuti angaremerwa sei kana akura zvakakwana.
Zera Diki huremu Kurema kukuru Avhareji uremu
Mavhiki manomwe 5 lb (2.2 kg) 17 lb (7.7 kg) 9 lb (4 kg)
Mavhiki masere 5 lb (2.2 kg) 17 lb (7.7 kg) 10 lb (4.5 kg)
9 mavhiki 8 lb (3.6 kg) 17 lb (7.7 kg) 12 lb (5.4 kg)
Mavhiki gumi 10 lb (4.5 kg) 22 lb (9.9 kg) 15 lb (6.8 kg)
Mavhiki gumi nerimwe 12 lb (5.4 kg) 25 lb (11.3 kg) 17 lb (7.7 kg)
3 mwedzi 16 lb (7.2 kg) 33 lb (14.9 kg) 22 lb (9.9 kg)
4 mwedzi 22 lb (9.9 kg) 44 lb (19.9 kg) 30 lb (13.6 kg)
5 mwedzi 25 lb (11.3 kg) 52 lb (23.5 kg) Makirogiramu makumi mana (18.1 kg)
6 mwedzi 27 lb (12.2 kg) 61 lb (27.6 kg) 44 lb (19.9 kg)
7 mwedzi 31 lb (14 makirogiramu) 67 lb (30.3 kg) 45 lb (20.4 kg)
8 mwedzi Makirogiramu makumi mana (18.1 kg) 67 lb (30.3 kg) 52 lb (23.5 kg)
9 mwedzi 44 lb (19.9 kg) 68 lb (30.8 kg) 52 lb (23.5 kg)
Mwedzi gumi 50 lb (22.6 kg) 68 lb (30.8 kg) 60 lb (27.2 kg)
11 mwedzi 52 lb (23.5 kg) 80 lb (36.2 kg) 65 lb (29.4 kg)
1 gore 55 lb (24.9 kg) 90 lb (40.8 kg) 70 lb (31.7 kg)
2 makore 55 lb (24.9 kg) 90 lb (40.8 kg) 70 lb (31.7 kg)
Mavhiki manomwe 3 lb (1.3 kg) 17 lb (7.7 kg) 9 lb (4 kg)
Mavhiki masere 3 lb (1.3 kg) 17 lb (7.7 kg) 11 lb (4.9 kg)
9 mavhiki 7 lb (3.1 kg) 17 lb (7.7 kg) 13 lb (5.8 kg)
3 mwedzi 16 lb (7.2 kg) 34 lb (15.4 kg) 23 lb (10.4 kg)
4 mwedzi 25 lb (11.3 kg) 55 lb (24.9 kg) 33 lb (14.9 kg)
5 mwedzi 27 lb (12.2 kg) 67 lb (30.3 kg) 42 lb (19 kg)
6 mwedzi 29 lb (13.12 kg) 75 lb (34 kg) 52 lb (23.5 kg)
7 mwedzi 32 lb (14.5 kg) 75 lb (34 kg) 59 lb (26.7 kg)
8 mwedzi Makirogiramu makumi mana (18.1 kg) 77 lb (34.9 kg) 61 lb (27.6 kg)
9 mwedzi 45 lb (20.4 kg) 77 lb (34.9 kg) 61 lb (27.6 kg)
Mwedzi gumi 50 lb (22.6 kg) 77 lb (34.9 kg) 63 lb (28.5 kg)
11 mwedzi 55 lb (24.9 kg) 77 lb (34.9 kg) 66 lb (29.9 kg)
1 gore 65 lb (29.4 kg) 77 lb (34.9 kg) 68 lb (30.8 kg)
2 makore 65 lb (29.4 kg) 80 lb (36.2 kg) 73 lb (33.1 kg)
Tarisa Huchi Nyuchi inokura pazasi:
Saizi padivi, iwe zvakare unoda kuve nechokwadi chekuti vari kusvika pazviitiko zvavo. Pazasi pane eGolden Retriever matanho ehupenyu uye zvaunofanira kutarisira.
Mushonga wekutanga wekubaiwa unoitika pakati pemasvondo matanhatu kusvika kumasere. Haufanire KUNA kuunza kumba isina kuvharirwa mbwanana. Izvi zvinoratidza kuti anobva kumumiriri ane mumvuri uye kuti ari panjodzi yezvirwere.
Sezvo zvese zvaari zvitsva kwaari, anogona kunge achitya uye kutya nyore.
Iye achangobva kusiya kwake sosi yekuchengetedzeka uye ari kure nevamwe vake marara naamai kekutanga. Nerudo uye nehanya, anowana chivimbo nekukurumidza.
Ari kudzidza zvakare kudzora ura hwake, saka iwe unofanirwa kuve nemoyo murefu. Mubudise kuti azorore mushure mekudya kwese.
Unogona kutanga kupa chikafu cheGoridhe padanho rino ne ⅓ kusvika ½ makapu of yemhando yepamusoro kibble pakudya kwega kwega. Govanisa muzvikamu zvina zvidiki zvezuva rese.
8-vhiki-yekare (maviri-mwedzi-yakura) Goridhe Retriever
Parizvino, mbwanana yako inofanira kunge ichigadzika mukati nekuti ivo vanokwanisa kuchinjika.
Izvi zvakare zera rakakurudzirwa kutanga kudzidziswa . Kupaza imba inonyanya kukosha kudzivirira tsika dzakaipa kubva mukukura.
Kana iwe uchida kuti ave neushamwari kune vese, kushamwaridzana pazera iri kwakakoshawo . Izvi zvinomubatsira kukura kujairana neasingaone kuona, hwema, uye manzwi.
Kwekudya, namatira pakumupa kudya kwake kudiki zuva nezuva nemari yakafanana yakataurwa kweanomwe-vhiki Goldens.
12-mavhiki-akura (matatu-mwedzi-yakura) Goridhe Retriever
Gadzirira iyo yechipiri kutenderera majekiseni . Mushure mekudzivirira, chengetedza mwana wako kure nedzimwe mhuka kweanopfuura vhiki mbiri.
Izvi zvinovatendera kuti vave nehutachiona huzere, kunyanya kupokana neinouraya parvovirus .
Vari kuva kunyanya kuda kuziva , uye iwe unogona kunge uine dambudziko nekurumwa.
Ramba wakadzikama uye umudzidzise zvinyoro-nyoro asi zvine mutsindo kuti haatenderwe kutsenga pauri kana chero chimwe chinhu, kunze kwake kutsenga toyi .
Iwe unogona zvakare kumurumbidza pakushambidzika . Itai kuti ajaire kukamwiwa uye mapeche ake anobatwa.
Muudze iye kune blowdryer uye umurumbidze kana agara akadzikama.
Kubva pano kusvika vasvitsa mwedzi mitanhatu, vachange vachikudziridza tsika dzeupenyu hwese. Iwe unogona kutanga kuve wakakomba zvakanyanya nezve kudzidziswa .
Izvo zvakakosha ndezvekuenderana. Usamurange sezvo izvi zvichaparira kutya.
Iwe haudi kushamwaridzana nemanzwiro asina kunaka, kana zvinogona kukanganisa kudzidziswa kwake.
Izvo zvakare iri nguva yakakodzera yekumuzivisa kuzvikafu zvakakura ikozvino. Paradzira makapu maviri ebibble pamusoro pezuva, uye cheka kudya kumwe kunopera kwevhiki.
16-mavhiki-akura (4-mwedzi-yakura) Golden Retriever
Usashamiswe kuona yako puppy ichirasikirwa nehunhu hwayo.
Achasvika pahafu yehukuru hwake pazera iri . Iye anofanirawo kunge ari kutora mirau yekutanga. Kana mwana wako achikurumidza kudzidza, tora icho chinyorwa nekumudzidzisa mashoma mashoma.
Makumi maviri-masvondo-ekuberekwa (mashanu-mwedzi-yakura) Goridhe Retriever
Mbwanana yako ichatanga iye chaiye teething kutenderera zera iri .
Govera mamwe ekutsenga matoyi ayo iwe aunogona kutonhodza mufiriji kudzikisira kusagadzikana kwake.
Iwe unogona zvakare tanga kumushandisa kwemaminetsi makumi maviri. zuva , sezvo iri iri danho raanofanira kuratidza kufara kune vekunze.
Ita shuwa yekuchengetedza zviitwa zvakadzikira kukanganisa kudzivirira kunetseka kwemajoini emwana wako. Kushambira, kutora, uye kufamba zvakanaka kutanga zvinhu.
Mamwe maGolden akadzidziswa poto kutenderera mwedzi mina, kunyangwe tsaona dzichiri kuitika.
Mwedzi mitanhatu-yeGolden Retriever
Goridhe Retrievers pazera iri inogona kutaridza kusanzwisisika uye kusaenzana. Achave nemuviri wemunhu mukuru, asi makumbo uye muswe wembwanana.
Zvakare, mhino yake nenzeve zvinokura nekukurumidza, saka iwe unopedzisira uine goofy anotaridzika mwana.
Unofanirwa kungwarira naye kwemwedzi mitanhatu inotevera nekuti apa ndipo pavanonyanya kutambura mukukura hudyu dysplasia.
Dzivisa kufamba kwenguva refu, uchidzika nematanho, uye nekumira kamwe kamwe uchimhanya. Iko kumanikidzwa kubva kune izvo zviitiko kunogona kukonzera majoini kuumbika.
Yako Goridhe inogona zvakare kutanga kuratidza zviratidzo zvekukura pabonde mumwedzi mishoma inotevera, kana isina neutered kana kuraswa.
Iye ari kutangawo kuwana rake basa mupakeji uye anogona kupokana nenhengo dzemhuri, ingave munhu kana mvere.
1-gore-gore reGolden Retriever
Mbwanana yako ingaite kunge munhu mukuru, asi icharamba yakadaro ita sembwanana kwemakore maviri kana matatu anotevera . Mamwe maGolden haatombokura kubva mairi uye anoramba ari madiki pamoyo kusvika pakukwegura kwavo.
Iwe unogona kutanga zvimwe zvinonetsa zviitiko panguva ino Kuti ave nechokwadi kuti akasununguka kubva muhudyu dysplasia, ita kuti aongororwe nachiremba paanenge aine makore maviri ekuberekwa.
Zvakatipoteredza, chikafu, genetics, sterilization, murume kana murume - zvinhu zvakawanda zvinoita chikamu mukukura kwembwa chero ipi. Kuchengeta kukura kweGoridhe rako nekushandisa chati kunogona kubatsira kuona chero hazvo mamiriro ehutano.
Nyaya dzehutano dzinogona kukanganisa kukura kwembwanana
Dzimwe nyaya, senge hookworm kana mhonye , inogona kukanganisa kukura kwako kweGoridhe. Izvi zvinomutadzisa kusvika pazvaanogona zvizere.
Kana ikasarapwa, inogona kukonzera kukuvara kusingagumi kumapfupa avo, mhasuru, immune system, ganda uye kugaya system.
Kurwara kwenguva yakareba kunogona kukanganisa kukura kwake. Mbwanana yako inogona kudonha nekuda kwekushaya chikafu.
Njodzi dzekudzikira kana kukurumidza kukura
Vamwe vanhu vanosarudza yakakura Goldens, vamwe vakaita saiyo madiki, senge Mini Goridhe Kudzosera . Izvi zvinogona kutungamira pasi kana kuwedzererwa-kudyisa, uye hapana chazvo chakakodzera.
Kukurumidza kuwedzera kunogona kukonzera hudyu kana gokora dysplasia . Iyo inogona zvakare kuve inokonzera chirwere chepfupa uye arthritis.
Mbwanana dzakadzimbikana, kungave nekurwara kana kushaya zvekudya, kazhinji hadzina kusimba, uye dzinoita kuti dzive panjodzi yekurwara.
Goridhe Retrievers inomira riini kukura?
Mbwanana yako inosvika pakukwirira kwayo kuzere pakati pemwedzi mipfumbamwe kusvika gumi nemiviri ekuberekwa, asi ichazadza chete nemwedzi gumi nemasere .
Vanodzosera Goridhe kukura inokurumidza pakati pemwedzi mitatu kusvika kumitanhatu yezera . Pakati peiyo mwedzi mitanhatu mucherechedzo, kukura kwavo kunotanga kupera.
Izvi zvinokupa iwe zano rekuti vachakura sei nekuti vanozove ⅔ kukura kwavo vakuru.
Ndeipi zera rakanakisa rekurasa / neuter yeGoridhe Retriever?
Unogona kukanda mbwanana sekutanga kwemavhiki masere ekuberekwa , asi chero nguva vasati vasvika kukura pabonde inosarudzwa, inova vangangoita gore rimwe chete .
Izvi zvinodzivirira hunhu husingadiwe sekumaka, hunhu hwenzvimbo, kana kugadzirisa nematoyi. Zvese izvo zvakaoma kugadzirisa kana zvichiratidza.
Zvemhando izvo zviri yakatemerwa muchiuno dysplasia , maveti anokurudzira kuripwa kutenderera iyo 6-mwedzi mucherechedzo.
Kuisa neutering kana kurasa yangu Goridhe Retriever kunogona kukanganisa kukura kwake here?
Ehe, kugadzirisa imbwa vasati vasvika pazera repabonde kazhinji kunokonzeresa imbwa yako kukura. Izvi zvinodaro nekuti mahormone ebonde anodzvinyirira mahormone ekukura.
Pasina kukura kwekudzivirira, yako Goridhe inoenderera ichikura.
Kunze kwematambudziko ejoinhi, kune zvekare kune akati wandei nyaya dzakabatana nekurasa kana neutering. Ivo vanogona kuve vanowanzo tenderera kune mamwe marudzi ekenza .
Izvo zvinogona zvakare kukonzera 'spay incontinence' mune vakadzi kana ivo vakura.
Dzimwe imbwa dzinowanawo shanduko mumaitiro mushure mekuvhiya. Kushaikwa kwesrogen kunogona kuita imbwa hadzi dzinowedzera hasha . Imbwa dzechirume dzinogona zvakare kuona kuwedzera kwekutya.
Kukura pabonde kunowanzoitika muGoridhe kutenderedza Mwedzi 8 kusvika ku12 . Izvi zvinokupa iwe nguva yakaringana yekusarudza kuti oita sterilize here kana kuti kwete.
Anorema zvakadii achangoberekwa weGolden Retriever puppy?
Achangoberekwa Goridhe Retriever puppy
Achangoberekwa Goridhe Retrievers anofanirwa kuve 1% yehurema hwepamuviri hwaamai vavo , uye izvi zvinowanzoitika 14 kusvika ku16 ozs .
Asi, vana vadiki kunge gumi oz pakuberekwa zvakanyorwa . Vanowanzo siya amai vavo pa10 lbs.
Mbwanana dzinobva pamarara mamwe hadzizove dzakaenzana saizi. Zvakare, marita akakura anowanzove nembwanana diki , asi ivo vese vanofanirwa kubata nevhiki ravo rechisere.
Nzira yekuziva yakanyanya kufuta Goridhe Retriever
Shandisa maziso ako nemaoko. Kana iwe uchikwanisa kuona mbabvu dzake, iye akaonda zvakanyanya. Asi kana iwe usingakwanise kuvanzwa, iye akanyanyofuta!
Ongororo muna 2012 akaratidza izvozvo 62.7% yeGold Retrievers muAmerica angave akafutisa kana kufutisa .
Kunyangwe ichitaridzika kunge yakanaka kana inosetsa, imbwa dzinorema chaizvo dzine hupenyu hupfupi. Kuve wakanyanyisa chubby kuveura makore maviri uye inokonzeresa nyaya dzehutano.
Ko mhando dzeGolden Retriever dzine mwero wekukura wakasiyana?
MaBritish, maAmerican, neCanada Golden Retrievers havana musiyano wakakura mukukura. Ratidza imbwa dzinowanzo kurema kupfuura imbwa dzinoshanda.
Usavhunduka kana imbwa yako inoshanda iri diki zvishoma pane iyo yekufungidzira kukura. Chero bedzi ari kuwedzera uremu zvakadzikama , hapana chikonzero chekushushikana.
Zvakare, tarisa vabereki vemuputi wako, kana vari vadiki pane avhareji, wako Goridhe angangove ari padivi diki, uye zvinopesana ichokwadi, futi.
Yakachena Goridhe Retrievers
Goridhe rega rega rakasiyana uye rinokura pamwero waro . Chinokosha ndechekuona kuti ivo havasi kukura nekukurumidza kana kuti zvishoma nezvishoma - kukura kwakadzikama kwakanaka .
Kunze kwezvimwe zvinhu zvatakataura, kudya kunovaka muviri uye nemararamiro anoshanda kuchabatsira kuchengetedza Goridhe rako riine hutano uye rinofara.
Rangarira, saizi yavo yekupedzisira ichasiyana kubva kune imwe, zvichienderana nekusiyana uye madzinza.
Mudiki uye akanaka: Iyo Yorkshire Terrier yakakunakira iwe?
Breed Basics: Iyo Yakasviba Muromo Cur
maltese poodle musanganiswa wakakura
dzinza remagomba mazita
border collie lab mix uremu